Mitemo Yangu mitatu paRace, Chitendero, Zvematongerwo enyika, Bonde uye Bigotry | Martech Zone
Mugovera, Kubvumbi 14, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Nhau pamusoro Imus vhiki ino yakanyatsomutsa hurukuro zhinji uye ndakanakidzwa nekugovana zvandaifunga neshamwari dzangu nemhuri. Kuva baba, ndinonyanya kungwarira maitiro andinodzidzisa vana vangu. Ichokwadi chaizvo kuti rusaruraganda nehunhu zvinopfuudzwa kubva kuvabereki kuenda kuvana vavo.
Mitemo Yangu Mitatu:
Handimbofi ndakanzwisisa. Semurume, handimbofi ndakanzwisisa zvakaita mukadzi. Semuchena, handimbofi ndakanzwisisa zvazvinoita kuve vashoma. Semurume akatwasanuka, handimbofi ndakanzwisisa zvazvinoita kuve ngochani. Semukristu, handimbofi ndakanzwisisa kuti zvakaita sei kuva chimwe chitendero. Ndakagamuchira kuti hazvingamboiti kuti ndinzwisise; saka pachinzvimbo, ini ndinongoedza kuremekedza izvo zvandisinganzwisise.
Munhu wese akasiyana uye ndiko kupesana kwedu kunoita kuti tisiyane uye chipo chinobva kuna Mwari. Ini ndinoda misiyano mutsika, rudzi, zvitendero, vanhukadzi, hupfumi… zvese nezvazvo. Zvichida ndicho chimwe chezvikonzero nei ndichida chikafu zvakanyanya… zvinwiwa zvetsika dzakasiyana (Indian, Chinese, Taiwanese, Italian, Soul Food, Polish, Ukrainian… mmm) zvinoshamisa. Mimhanzi yangu zvinonaka zvakafanana ... unogona kundiwana ndichiteerera Notorious BIG, Vatatu Tenors, Mudvayne kana Vacheche muToyland… nezvose zviri pakati. (Kunyangwe ndichifanira kubvuma kuti handina kuravira nyika).
Mipimo miviri chikamu chehupenyu. Mitero yemitero, SAT zvikoro, kupaka vakaremara… unozvitumidza uye pane zvimiro zviviri. Mipimo miviri haisi chinhu chakashata… munhu wese akasiyana uye akasiyana mareti fanira shandisa. Ini ndanzwa nekuona vamwe vanhu vachida kushandisa izvozvi nhungamiro dzakadzingwa Imus nekuchishandisa kuhip-hop kana ma comedian.
IMHO, pane mukaha muhombe uripakati pekunongedzera kutaura kwemarudzi kune rimwe boka revanhu kuseka kana kuwedzeredza pamusoro pevakawanda. Ita jee nezvevanhu vane mafuta uye ini ndinogona kunge ndiri wekutanga kuseka uye kuudza joke kune mumwe munhu ... asi ita joko rakakora raida kundikuvadza uye rakasiyana (kunyangwe ini ndichiri kuseka ndikaudza mumwe munhu). Ndakanzwa majee pamusoro pevaConservatives, vaRiberal, maJuda, maChristu, vatema, Varungu, maAsia, maArabu, nezvimwewo zvinoseka… vanowedzeredza mushe mushe asi vasingaparadzi hunhu nenzira inorwadza.
Musiyano ndewekuti chinangwa ndechekukuvadza kana kubatsira kunzwisisa kwedu kune mumwe nemumwe. Dzimwe nguva iyo inyaya yekuona, asi ndizvo chaizvo zvatinofanira kuziva. Hapana mutsetse mujecha. Chinhu chinogona kuseka kune mumwe munhu uye chinokuvadza kune chinotevera.
Izvo zvakati, "Ini ndakambopfuura nemuganhu here?". Hongu, zvachose… uye ini ndakangozvidemba uye ndakazvidemba nazvo. Ini handitende kuti ndakambova munhu ane hukasha, asi ini ndaive mudiki uye ndisingazive vamwe. Iyi mitemo mitatu ndiyo yandakashanda kupa vana vangu zvakanyanya kutanga kupfuura zvandaive nazvo.
Kana vanhu vakadzidza kuona mutsauko wedu, kuvaremekedza uye nekuvambundira, ndinonzwa chokwadi kuti nyika ino ingave nzvimbo iri nyore kugara.
Kutenda kuna JD nekundikurudzira kunyora izvi.
Blogging Sarudzo Mipiro
Apr 14, 2007 pa 4: 50 PM
Pfungwa yako yekutanga chinhu chandinoshuvira kuti dai munhu wese akanzwisisa. Nzira yakanakisa yekunzwisisa kweboka revanhu, chinamato, kana chero chinhu chakasiyana newe pachako kuchengeta pfungwa dzakavhurika, kuremekedza zvavanotenda kwete kumanikidza nzira dzako pavari. Great post.
Apr 14, 2007 pa 5: 14 PM
Tinofanira kupemberera misiyano yedu. Pane zvakawanda zvatinofanira kupa mumwe nemumwe. Kufamba ndechimwe chezvinhu zvakanyanya kuvhura maziso zvekuita. SemuAmerican, ndakakatyamadzwa pandakaenda kunyika dzakasiyana uye ndikaona kuti nyika zhinji dzakagadzirwa. Isu tine maitiro ekuti USA ndiyo yega uye chete, asi kune zvimwe zvakawanda zvekuona. Izvo zvakafanana nechikafu uye Race. Pane zvakawanda zvakanaka. Ini ndinonakidzwa nekutaura nevasarura uye kuvaziva. Ini ndinobatanidza vanhu vandine zvishoma zvakafanana. Ruremekedzo gakava rakanaka, ruvengo haruna. Basa rakanaka Doug
Apr 14, 2007 pa 5: 45 PM
Vanhu vazhinji vanotevera iyo Imus mamiriro vari kusimudzira mureza weFree Speech, vachiti kupfura kwake kwaive kusiri kweAmerica.
Ini ndinofunga kazhinji tinokanganwa kuti kutaura kwaImus kwakachengetedzwa. Haasi kubviswa makumbo kana maoko, kana kugara muchitokisi chejeri nekuda kwezvaakataura. Izvo chete ndizvo bumbiro rinopa.
Pane mutsauko pakati pekutaura kwakachengetedzwa nemhedzisiro yekutaura zvinhu zvisingafarirwe uchishandisa kutaura kwakadzivirirwa.
Hapana munhu anofanirwa kushandisa Imus kana vasingade. Hapana munhu anofanirwa kutaura naye, kumuteerera, kana chero chimwe chinhu. Arikubhadhara mhedzisiro (yakanaka kana kwete) yezvaakataura achishandisa kutaura kwake kwakadzivirirwa.
Apr 15, 2007 pa 6: 08 PM
Kwakanaka sei kwauri Mr. Karr. Ini ndinoti unonamira pane zvauri kugona. Iyi ndiyo mhando yezvinhu zvekare zve "Kumbaya" zvandinotora nharo nazvo, uye izvo zvandinofungidzira zvakawanda zvemagariro edu nyaya.
Vhura tsamba kuna Mr. Karr
Apr 15, 2007 pa 7: 02 PM
Ini ndaikurudzira vese vaverengi kuti vatevere iyo batanidza kune ET Cook's post kuverenga mhinduro yangu. Ndiwo musoro wakakodzera kukurukurwa, ndezvechokwadi. Iyi ndiyo mhando yenyaya iyo munhu wese yaanofarira kudzivirira mazuva ano.
Kunyarara kuri kutikuvadza - tinofanirwa kukurukura nezvazvo.
Apr 15, 2007 pa 7: 05 PM
Ndinokutendai nemhinduro yenyu yekuremekedza VaKarr. Ndapindura nenzira yakanaka kumashoko ako.